पुरुषको कानबाट नै थाहा हुन्छ, कुन मानिस धनी र कुन कंगाल हुन्छ भनेर? | rochak nepali khabarside
पुरुषको कानबाट नै थाहा हुन्छ, कुन मानिस धनी र कुन कंगाल हुन्छ भनेर?
त्यस्तै जो व्यक्तिका कान जन्मजात नै लामा हुन्छन् तिनीहरुले लामो जिवन जिउने समुन्द्रशास्त्र बताउँछ । जन्मजात नै लामा कान भएका व्यक्तिले जिवनमा कम संघर्ष गर्न पर्छ । कान चेप्टा भएका व्यक्तिले भने भिन्न खालका हुन्छन् । उनीहरु भोग विलासी स्वभावका हुन्छन् । कानमा लामा लामा रौँ आएका व्यक्तिहरुलाई मानिसले मन नपाराए पनि उनीहरु दिर्घायू हुने शास्त्रको दावी छ
Admin27:04:00 AM